လတျတလောအခွအေနေ ကနေ မွနျမာပွညျကွီး လှတျမွောကျနိုငျ တဲ့ နညျးလမျး တဈခုကို ရေးသား လာတဲ့ ဖွူဖွူကြျောသိနျး – Shwe Likes
အဆိုေ တျာဖွူ ဖူကြျော သိနျးကေ တာ့အမို ကျစား အသံပါဝါနဲ့ အတူတေးသီခြ ငျးကော ငျးမြားစှာကိုတီ ဆိုထားပွီး ပရိတျသတျေ တှရဲ့ အားပေးမှုကိုအ ခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ အဆိုေ တျာကောငျးတ ဈယောကျပဲဖွဈ ပါတယျ။ဖွူ ဖူကြျောသိနျးက ဗဟု သုတရတဲ့ စကား မြားကို
မကွာခဏ ဆိုသလိုပွောပွလရှေိ့ပွီး သူမရဲ့လူမှုကှနျ ယကျထကျမှာလဲရေး သားဖျေွာ ပလရှေိ့ပါတယျ၊ွ ဖူဖွူကြျောသိနျးကသူမရဲ့ ခံစားခကျြအ ခြို့ကိုလဲမကွာ မကွာသူမရဲ့ Instagram အကောငျ့မှာေ ရးသားဖျောပွလရှေိ့ပါေ သးတယျနျော။ဒီ မီုကရစေီအရေး ကို ပွနျလညျ
တညျဆောကျဖို့ တကျတကျွ ကှကွှ ကွိုးပမျးေ ဆာငျရှကျနတေဲ့ ပွညျသူတှနေဲ့အတူ တဈသား တညျးအပွညျ့အဝရပျတ ညျပေးခဲ့တဲ့ အနုပညာ ရှငျေ တှထဲမှာ အဆိုတျော ဖွူဖွူကြျောသိ နျးလညျး အပါ အဝငျဖွဈပါတယျ။ တိုငျးပွညျရဲ့ အနာဂတျလှပေ အာငျ တဈထောငျ့
တဈနရောကနေ တာဝနျသိပွ ညျသူတဈေ ယာကျအနနေဲ့ တတျနိုငျသလောကျလညျး အလှူလေးေ တှပွုလုပျခဲ့ပါတ ယျ။အခုတဈခါ မှာဆို ဖွူဖွူက ” “အနာရသူမြားကို မ နာကွသေးသူမြားက
စာနာတဲ့တ ဈနေ့ မွနျမာပွညျကွီး လှတျမွောကျ မယျ”…တဲ့ ” ဆိုပွီးရေးသား လာခဲ့ပါတယျ. .. ပရိသတျကွီးလညျး မွနျမာပွညျကွီး အမွနျဆုံးလှ တျမွောကျဖို့ ဆုတောငျးပေးကွပါအုံးနျော… Source: Phyu Phyu Kyaw Thein
အဆိုေ တ်ာဖြူ ဖူကျော် သိန်းကေ တာ့အမို က်စား အသံပါဝါနဲ့ အတူတေးသီချ င်းကော င်းများစွာကိုတီ ဆိုထားပြီး ပရိတ်သတ်ေ တွရဲ့ အားပေးမှုကိုအ ခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အဆိုေ တ်ာကောင်းတ စ်ယောက်ပဲဖြစ် ပါတယ်။ဖြူ ဖူကျော်သိန်းက ဗဟု သုတရတဲ့ စကား များကို
မကြာခဏ ဆိုသလိုပြောပြလေ့ရှိပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန် ယက်ထက်မှာလဲရေး သားဖော်ြ ပလေ့ရှိပါတယ်၊ြ ဖူဖြူကျော်သိန်းကသူမရဲ့ ခံစားချက်အ ချို့ကိုလဲမကြာ မကြာသူမရဲ့ Instagram အကောင့်မှာေ ရးသားဖော်ပြလေ့ရှိပါေ သးတယ်နော်။ဒီ မီုကရေစီအရေး ကို ပြန်လည်
တည်ဆောက်ဖို့ တက်တက်ြ ကွကြွ ကြိုးပမ်းေ ဆာင်ရွက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တစ်သား တည်းအပြည့်အဝရပ်တ ည်ပေးခဲ့တဲ့ အနုပညာ ရှင်ေ တွထဲမှာ အဆိုတော် ဖြူဖြူကျော်သိ န်းလည်း အပါ အဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်လှပေ အာင် တစ်ထောင့်
တစ်နေရာကနေ တာဝန်သိပြ ည်သူတစ်ေ ယာက်အနေနဲ့ တတ်နိုင်သလောက်လည်း အလှူလေးေ တွပြုလုပ်ခဲ့ပါတ ယ်။အခုတစ်ခါ မှာဆို ဖြူဖြူက ” “အနာရသူများကို မ နာကြသေးသူများက
စာနာတဲ့တ စ်နေ့ မြန်မာပြည်ကြီး လွတ်မြောက် မယ်”…တဲ့ ” ဆိုပြီးရေးသား လာခဲ့ပါတယ်. .. ပရိသတ်ကြီးလည်း မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံးလွ တ်မြောက်ဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါအုံးနော်… Source: Phyu Phyu Kyaw Thein